क–कसले पाउँछन् अमेरिकाले दिएको १५ लाख मात्रा खोप ? - Aarthiknews
क–कसले पाउँछन् अमेरिकाले दिएको १५ लाख मात्रा खोप ?
मंगलबार, २९ असार २०७८
काठमाडौं । सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान नियमित रूपमा अघि बढाउने भएको छ । गत २५ असारमा ८ लाख मात्रा भेरोसेल र हिजो सोमबार १५ लाख ३४ हजार ८ सय ५० मात्रा जोनसन एण्ड जोनसन खोप भित्रिएपछि सरकारले खोप अभियान नियमित गर्न लागेको हो ।